तिर्खा : माला खनालको फेसबुक शेयर
माला खनालको फेसबुक शेयर
सामाजिक संजालमा अभिव्यक्त भएका हरेक शव्दहरु विशेष हुन्छन, उपहार हुन्छन । गज़लकार माला खनालजीले तिर्खाको बारेमा लेख्नु भएका यी उद्गारहरुको लागि हार्दिक हार्दिक आभार । यहाँहरु सबैको आत्मियता यसरी नै पाइरहुँ ।
लेख्नु भएको छ ,
हजुरहरुलाई तिर्खा कत्तिको लागेको छ ?? मलाई त सारै तिर्खा लागेर त यो किताब किनेर प्यास मेटाउँदै छु ,, इजरायल को बारेमा सबै समेटिएको कृष्णपक्ष भाइको यो किताब पढ्न न छुटाउनु होला है '''पवित्रभुमि इजरायल लाई इतिहाँसमा पटक पटक भनिएको छ यो युद्दभुमि पनि हो ''''' यो किताब भित्रको सानो अंश मात्रै हो अरु आफै किनेर पढ्नु होला है !!!!
हजुरहरुलाई तिर्खा कत्तिको लागेको छ ?? मलाई त सारै तिर्खा लागेर त यो किताब किनेर प्यास मेटाउँदै छु ,, इजरायल को बारेमा सब...